» प्रहरीले किन भेटाउन सक्दैन रामबहादुर बम्जनलाई ?
प्रहरीले किन भेटाउन सक्दैन रामबहादुर बम्जनलाई ?
मकवानपुर । बलात्कार र आनी बेपत्ता गरेको आरोप लागेका तपस्वी रामबहादुर बम्जनविरुद्ध जिल्ला अदालत, सर्लाहीमा मुद्दा दायर छ । तर उनी पक्राउ भने परेका छैनन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), विशेष ब्युरो, सिन्धुली प्रहरी र सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले समेत उनको खोजी कार्य जारी राखेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्लाहीले असारमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७६ अनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । जसमा बम्जनसहित तीन जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
जसमा मुख्य प्रतिवादी रामबहादुर बम्जन नै छन् भने उनलाई सघाएको आरोपमा आश्रम प्रमुख ज्ञानबहादुर बम्जन र जेबी गुरु भनिने जितबहादुर तामाङ छन् । बम्जनलाई १४ वर्षसम्म र अरु दुई जनालाई त्यसको आधा सजायको मागदाबी छ । पटक-पटक प्रहरीले बम्जनको आश्रममा छापा मारे पनि उनलाई फेला पार्न सकेको छैन ।
हालसम्म तीनैजना फरार छन् । बम्जनले ०७३ साउन २० मा आश्रममै आएकी आनीलाई प्रलोभनमा पारेर यौनशोषण र बलात्कार गरेको आरोप छ । उनीविरुद्ध ०७६ माघमा उजुरी परेको थियो ।
असारमै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायतको प्रहरीको विशेष टोलीले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ८, पैरेस्थित बम्जनको आश्रम सिल गरेर छापा मारेको थियो । झन्डै १० घण्टा लामो प्रहरी अपरेसनमा पनि भेटिएनन् ।
एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बम्जन सिन्धुलीकै त्यही आश्रम रहेको जंगलमै लुकेका छन् । घना जंगल भएकाले सहज रुपमा ‘सर्च’ गर्न सजिलो छैन । उनले ठाउँ-ठाउँमा सूचना दिने सुराकी राखेका छन् । त्यसैले हामी अगाडि बढ्दा बमजनले त्यो सूचना पाउँछन र आफूलाई सुरक्षित बनाउँछन् ।”
गत माघ २३ गते बम्जनविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । बम्जनको सिन्धुपाल्चोक आश्रममा पनि प्रहरीले छापा मारेको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)कै टोलीले सिन्धुपाल्चोकस्थित आश्रममा पनि खानतलासी गरेको थियो । सो क्रममा बम्जनको आश्रमबाट शव गलाउन प्रयोग गरिएका नुनका ढिकाहरू फेला परेका थिए ।
बम्जनमाथि सर्लाहीकी रिता बोट, नुवाकोटकी कर्मा तामाङ र मकवानपुरकी फुलमाया तामाङको हत्या गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । बम्जनका समर्थकहरुले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएयता बम्जन देखिएका छैनन् ।
बम्जनको आश्रम रहेको सिन्धुलीको जंगलमा अत्याधुनिक भवनसमेत छन् । जिम हाउस पनि छ । बम्जन सोही जंगलमै लुकेको दाबी प्रहरी अधिकारीको छ ।
बम्जनले ठाउँ-ठाउँमा सेन्ट्री पोस्ट निर्माण गरेका छन् । जसले नयाँ मान्छे वा प्रहरी आश्रम क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा भित्र सूचना प्रवाह गर्छन् । झन्डै ३५ बिघा क्षेत्रको घना जंगलमा बम्जनको आश्रम फैलिएको प्रहरीको दाबी छ ।
प्रहरीले बम्जनको आश्रम जंगलबाट हटाउनसमेत सुझाव दिएको छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि बम्जन अदालतमा उपस्थित हुने प्रहरी अनुमान थियो । तर उनी अदालतमा समेत उपस्थित नभएपछि प्रहरीले बम्जनविरुद्ध खोजी अभियान जारी राखेको छ ।बाह्रखरी डटकमबाट